नेपालीले माल पाएर चाल नपाएको औ’षधिजन्य गुणले ‘भरिपूर्ण करीपत्ता’ । – Yuwa Aawaj
नेपालीले माल पाएर चाल नपाएको औ’षधिजन्य गुणले ‘भरिपूर्ण करीपत्ता’ ।
असार ५, २०७८ शनिबार 953
काठमाडौ : डा. अरुणा उप्रेती –केही अघि चीनको औषधि कम्पनीले पुदिनाले भाइरल इन्फ्लु’एञ्जाबाट बचाउने औषधि निर्माण गर्ने भन्दै ‘पेटेन्ट’ गर्न खोज्यो।
तर, भारतका आयुर्वेद वैज्ञानिकहरूले आफ्नो उपचार पद्धतिमा वर्षौंदेखि पुदिनाको प्रयोग भइरहेको भन्दै ‘पेटेन्ट’ गर्न दिएनन्।
पुदिना हामीकहाँ पनि प्रशस्त पाइन्छ। तर, यसको महत्व हामीलाई अरूले नै बुझाइदिनुपर्ने भएको छ।
प्राचीनकालदेखि नै औ’षधीय गुणयुक्त वनस्पतिका रूपमा चिनिए पनि सिस्नो खाने मान्छेलाई धेरैले हे’यभाव राख्छन् । करी पत्ता चाहिँ धेरैले चिनेकै छैनन् । ‘करी’ पत्ता तराईतिर जताततै पाइने वनस्पति हो । यसको वैज्ञानिक नाम ‘मु’राया को’एनिजी’ हो ।
‘करी’ पत्ता पोषणको दृष्टिले अतिउत्तम , यसलाई ‘मीठा’ नीम पनि भनिन्छ । औ’षधिजन्य गुण हुने तर तीतो नहुने भएकोले यसलाई मीठा नीम भनिएको हुनुपर्छ दक्षिण भारत र श्रीलंकामा करी पत्ताको प्रयोग अत्यधिक गरिन्छ ।
यसमा रहेको भिटामिन ‘ए’ ले रतन्धो ह’टाउन मद्दत गर्छ तर दुःखको कुरो के भने नेपालमा यसबारे धेरैले थाहा नै पाएका छैनन्। हाम्रा भान्छामा प्रशस्त औ’षधि छन्। पुर्खाले त्यसैका भरमा रो’ग निको पार्दै आइरहेकै हुन्।
तर, आधुनिक औ’षधि विज्ञानसँगै भान्छा र करेसाबारीमा पाइने त्यस्ता औ’षधि विस्थापित भइरहेका छन्। त्यसैले सामान्यभन्दा सामान्य स्वास्थ्य स’मस्यामा पनि हामी ट्या’बलेट र सु’ईको भर पर्छौ। औ’षधिका लागि चर्को मूल्य ति’र्न बा’ध्य हुन्छौं।
Prevतीन झापाली गायिका एलिना, मेलिना र रचना एउटै फ्रेममा, देखियो यति राम्रो दोस्ती ।(भिडियो सहित)
Nextअसार ९ गतेदेखि दुबई–काठमाडौँ उडान सुरु हुने, कति छ टिकट मूल्य ?
टोकियो ओलम्पिकको उद्घाटनमा नेपालको झण्डा गौरीकाले बोक्ने !